Bayaan Gudoomiyaha Midowga Afrika ee xaalada Koonfur Afrika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Koofur Afrika » Bayaan Gudoomiyaha Midowga Afrika ee xaalada Koonfur Afrika
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Crime • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika, Moussa Faki Mahamat
Moussa Faki Mahamat wuxuu si adag u cambaareynayaa kororka rabshadaha ka socda Kwazulu-Natal, Gauteng iyo qeybaha kale ee Koonfur Afrika.
Guddoomiyuhu wuxuu tacsi tiiraanyo leh u dirayaa qoysaska dadkii ay waxyeelladu soo gaadhay, wuxuuna caafimaad deg deg ah oo buuxda u rajeynayaa kuwa dhaawacmay
Gudoomiyuhu wuxuu ku baaqayaa in si deg deg ah loogu soo celiyo kala dambayntii, nabada iyo xasiloonida dalka iyadoo si buuxda loo ixtiraamayo ku dhaqanka sharciga.
Guddoomiyuhu wuxuu ku celinayaa midnimada buuxda ee Midowga Afrika
U xilsaaran dowladda iyo dadka Koonfur Afrika.
Gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika, Moussa Faki Mahamat, wuxuu si adag u cambaareynayaa rabshadaha sii kordhaya ee sababay dhimashada dadka rayidka ah iyo muuqaalada naxdinta leh ee dhaca hantida dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, burburinta kaabayaasha dhaqaalaha, oo ay ku jiraan joojinta adeegyada muhiimka ah ee Kwazulu-Natal, Gauteng iyo qaybo kale oo Koonfur Afrika ah.
Guddoomiyuhu wuxuu tacsi tiiraanyo leh u dirayaa qoysaska dadkii ay waxyeelladu soo gaadhay, wuxuuna caafimaad deg deg ah oo buuxda u rajeynayaa kuwa dhaawacmay.
Gudoomiyuhu wuxuu ku baaqayaa in si deg deg ah loogu soo celiyo kala dambayntii, nabada iyo xasiloonida dalka iyadoo si buuxda loo ixtiraamayo ku dhaqanka sharciga. Wuxuu carrabka ku adkeeyay in haddii aan sidaa la yeelin ay saameyn ba'an ku yeelan karto oo keliya dalka laakiin gobolka oo dhan.